Baro origamiinka iyo asalka leh ilaha ugu fiican - Ikkaro
Diyaarado waraaqo ah oo Origami ah iyo tirooyin badan oo aan macquul ahayn.
Tan iyo markii aan yaraa waxaan xiiseynayay origami ama farshaxanka Origami. Waxaan xasuustaa sidii aan diyaarado waraaqo u sameysnaa, doomo iyo taangiyo ciidamadayda. Ilmo ahaan waan jeclaa.
Laakiin kaliya kama hadlayno arrimaha murugsan. Waxaan dooneynaa inaan muujino in origamiintu ay noqon karto mid aad ufudud kuna habboon kuwa yaryar ee guriga ku jira. Ma raadineysaa origami ee carruurta? Waxaan u diyaarinayaa qaybta si carruurtaadu u sameeyaan daraasiin tirooyin tallaabo tallaabo ah.
Diyaaradaha waraaqaha, doomaha, iyo xayawaanka iyo kuwo kale oo badan.
Waxaan qabaa diyaaradaha waraaqaha Waa inay noqotaa, oo ay weheliso xarigga qaansoleyda, mid ka mid ah kuwa ugu horreeya haddii uusan ahayn xiriirka ugu horreeya ee qof kasta oo leh origami. Haddii aad xiiseyneyso, waxaad sameyn kartaa daraasiin nooc oo ah diyaarado warqad ah, oo aad ka yaabin carruurta markay kaa codsadaan inaad mid sameysid. Waxaan ku bilaabay diyaaradaha oo waxaan sameeyay noocyo badan oo diyaarado waraaqo ah.
Mid ka mid ah daciifnimadayda, in kasta oo aan ka shaqeyn badan, waa xayawaanka waraaqaha ah.
Sida had iyo jeer, wajiyo badan ayaa u furan inay baaraan oo ay bartaan. Macluumaad badan oo aan kugu tuso baloogga oo aad ugu raaxaysato sida ugu badan ee aan sameeyo.
Jadwalka Dodecahedron ee 2018
Hadaad raadineyso a jadwalka miiskaaga 2018, qurux badan waana mid raqiis ah oo si sahlan loo dhisi karo wax la mid ah maaddooyinkaan daabacan ayaa loo sameeyaa si loo sameeyo dodecahedrons. Sidaad horeba ugu fikirtay, waxaa jira 12 weji oo geesoolayaal caadi ah, mid bil kasta :) Maalintiisii ​​aan ka hadalnay jadwalka joogtada ah, taas oo ah ikhtiyaar kale oo wanaagsan oo si fiican loogu soo saaro alwaax, warqad ama kartoon.
Moodhadhka goleyaasha maqaalka waxaa lagu sameeyay kuwa soo socda aaladda internetka, aad u dareen leh oo si sahlan loo isticmaali karo. Waxay ku saabsan tahay a matoor jadwalka dodecahedron.
Waa wax aad iyo aad u fudud. Waxaad kala dooraneysaa labada nooc ee dodecahedra ee ay bixiso, sanadka jadwalka, luqadda, haddii aad rabto lambarka usbuuca inuu soo muuqdo iyo in kale iyo qaabka uu abuurayo, kaasoo noqon kara PDF ama qoraal iyo soo dejin.
Sida loo sameeyo Star Wars baraf baraf
Kirismaskaani wuu ka duwanaan doonaa, waxaan u haystaa gebi ahaanba cad. Qurxinta Kirismaska ​​ee guriga waa aniga. ... Akhri akhriska
Wixii ah origamiis jecel ama Origami waxaan soo qaadaneynaa 3 barnaamij oo bilaash ah oo hadii aad wax yar sameyso ku geyn doona heer kale ... wax lamid ah Origami Jedi
Bakayle hore waa muunad ka mid ah waxa lagu gaari karo.
Waxay ku saabsan tahay
Sida loo sameeyo warqad lulid
Kuwa kale diyaarad dheeraad ah oo loogu talagalay ururinta diyaaradda waraaqda ah ee aan samaynayno.
Waa wax fudud duulaya oo ka samaysan warqad.
Sida loo sameeyo warqad jeexdin ah
Aad u aasaasi ah oo toos ah, laakiin waxaan qabaa origami ama origami waa inuu lahaadaa sida samaynta jaranjarada.
Sawirkani runtii wuu soo koobayaa,
Sawir laga soo qaaday Adduunyada Paliku
Sida loo sameeyo carsaanyo xaashi ah
Waqti badan ayaa naga soo wareegtay markii aan leenahay wax qabad origami ah, haddaba maanta waan idin keenaynaa sida loo sameeyo carsaanyo carsaanyo ah. Waxaan inta badan helnaa laba nooc oo moodooyinka carsaanyo ah. Dooro midka aad ugu jeceshahay. Waxaan ka tagayaa dhowr fiidiyow mid kasta
[iftiimiyay] UPDATED. Waxaan badalay fiidiyooyinkii asalka ahaa ee aan dhajiyay 2010. Waxaa jira fiidiyowyo badan oo badan oo kafiican maanta, waxayna u dhigmaan noocyo kala duwan oo ah xashiishka waraaqaha. Marka waxaan ku cusbooneysiiyay maqaalka dhowr aan jeclaaday. Ku raaxayso iyaga [/ iftiimiyay]
Laakiin waxaan kaaga digayaa in heerka waxqabadkani yahay mid dhexdhexaad ah, markaa ha quusan ;-) Fiidiyowyada waxaad ka heli kartaa tillaabada faahfaahsan ee tallaabada ah ee loogu talagalay qaabeynteeda. Haddii aad qasan tahay ama aadan haysan tallaabo cad, waad joojin kartaa fiidiyaha. Waa caawimaad weyn.
Sida loo sameeyo helikabtar waraaqaha guryaha lagu sameeyo ah
In ka badan helikobtar waxaan u maleynayaa inay tahay warqad autogyro ah. Laakiin waan kaftamay. Waxaan dhihi karnaa waxay ku saleysan tahay miraha khariidadaha, laakiin taasi horeyba waa fikradeyda.
Rikoor cusub oo Guinness ah waqtiga duulimaadka ee diyaarad warqad ah
Gelitaanka la cusboonaysiiyay 27-11-2017 Waxaan ku darayaa diiwaanno cusub oo lagu gaadhay duulimaadyada diyaaradaha waraaqaha sanadahan. Diiwaanka ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo booska warqad
Waxaan horey u soo bandhignay sida loo sameeyo nooc diyaarad warqad ah, maraakiib iyo taangiyo ciidamadeena. Iyada oo dhammaan kuwan ... Akhri akhriska